Aadan dheere iyo dhashiisii is guursatay! – Kaasho Maanka
DIGNIIN: Qormadan waxaa ku jira ereyo qayaxan oo laga yaabo akhristayaasha qaar kamida inay dhibsadaan.
Aadan dheere waxa la yidhaahdaa wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee waynuhu abuuray, dhoobo ayuuna ka abuuray. Maalmo yar kadib markuu cidlo dareemay Illaahay wuxuu feedhiisa uga abuuray haweeney ay nolosha wada qaybsadaan.
Shahrul-Casalkii markay Jannada ku raaxaysteen ayay jebiyeen amarkii Illaahay ee ahaa geedka ha cunina hana u dhowaanina, geedkii ay cuneen dartii waa lasoo tarxiilay. Geed yar oo ay cuneen bay tarxiil iyo masaafurin ku mutaysteen! Illaahay waa sii ogaa inay geedka cunayaan isaga ayaana soo fasaxay shaydaankii habaarka qabey ee ku dhiiri geliyey cunista geedka. Haddaan Illaahay soo fasixin Jannada iskama soo galeen.
Dhulka markay kusoo degeen waxay Xaawo oo ah haweeneydii ayaanka darnayd ee laga abuuray feedh nacasta Aadan dheere dhashay afar mataano ah laba wiil iyo laba gabdhood.
Labada wiil waxaa lakala odhan jirey Haabiil iyo Qaabiil laakin nasiib darro labadii hablood magacyadoodi la inooma sheegin. Haabiil iyo Qaabiil markay waynaadeen mid waliba wuxuu doonay oo damcay inuu guursado ka kale mataantiisa ay walaalaha yihiin.
Haabiil wuxuu yidhi Qaabiilow mataantaada isii aan tayda kusiiye. Walaalo is guursaneya weeye, ceeb waynaa!
Qaabiil wuxuu qoonsaday oo dookhiisa noqon waydey walaashiis oo ahayd mataantii Haabiil. Hadda afartuba waa walaalo isku hooyo isku aabo ah, laakiin kala dhalasho horreeyey.
Qaabiil wuu diidey in guurkii la dhamaystiro isagu wuxuu rabaa mataantiisii la dhalatay inuu guursado oo fuulo, dhaqan xumadaas ayuu ku diley walaalkiisi kale ee lahaa aan hablaha walaaleheen ah is dhaafsano si aanu guursano.
Ilma Aadan dheere dhaqan xumaadas ayay isku dileen, Aadan dheerena waa daawanayey xataa wuxuu odhan kari waayey war ma hablaha walaalihiin ah fuulitaankooda ayaad isku dileysaan gunyahay. Ugu danbayntii Haabiil waa la diley.
QORMO LA XIRIIRTA: Taariikh Kooban (Evolution)
Labadii hablood waxaa u soo hadhay nacaskii Qaabiil ahaa maadaama uu diley nacaskii kale ee Haabiil ahaa markan waa inuu isagu guursado oo fuulo labadii hablood ee walaalihii ahaa.
Aadan dheere wuxuu kala celin waayey caruurtiisii oo damcay inay is fuulaan welibana isku diley taa fuul iyo maya fuuli maaye tanaan fuulayaa. Islaantiisii Xaawo ee laga abuuray feedhiisa qalloocan ama feedh nacasta ayuu meelahaa la galay, iyada lafteedu waa iska aamusan tahay illeen feedh nacas bay ka abuuran tahay.
Qaabiil markuu arkay tuke wax aasaya ayuu isna iska aasay walaalkiisii uu diley dabadeetana labadii hablood buu meel halkaasa la galay. Xattaa wuxuu garan waayey bakhtiga walaalka iska astur.
Labadii hablood ee ilma Aadan dheere waxaa cidla ka helay nacaskii walaalkood ahaa, iyaga laftooduna arrinkaa waa ka aamuseen sida hooyadoodba uga aamustay.
Dadka adduunka jooga waxay kasoo jeedaan dhashii Aadan dheere ee is fuushay, weliba Qaabiilkii dhiigya cabka ahaa ee isku darsaday labadii hablood ee walaalihiis ahaa. Si kale hadaan u dhigo dadku waxay kasoo jeedaan walaalo is guursadey.
Dadka qayb baa arinkaa diidey oo waxay dheheen Illaahay ayaa ilma Aadan dheere hablo Xuural-cayn ah (dhilooyin) Jannada uga keenay, tolow hablihii ilma Aadan dheere iyaga rag ma loo keenay?
Aadan dheere iyo ayaan darantii Xaawo ahayd waxay adduukan ku yimaadeen tarxiil waxayna ahaayeen keligood. Dhulkay tarxiilka ku joogeen waxaa ugu dhashay afartaa qof, mid waa la diley labadii dumar ahaana kii soo hadhay ayaa isku darsaday oo guursadey.
Adiga akhriste maxay kula tahay? Aniga hadaad i waydiisey waxay ila tahay adduunyadani inay ka fac wayntahay nin dhoobo laga abuuray oo laga soo tarxiiley meel aan jiritaankeeda la hubin. Aniga waxay ila tahay dadku inay ka karaamo iyo sharaf badan yihiin inay kasoo jeedaan walaalo is guursadey ama doqon isku dishey guursiga hablihii la dhashay.
QORMO LA XIRIIRTA: Diin iyo Damiir
Hhh ninkaagani marna waad iga qoslisaa marna waad iga yaabisaa lkn ogow fikirkadahan badan ee aad xambaarsanthy cirro inaad ka qaado mooye inaad ka sal gaadhaa kuu suurta galimeyso. Aniguse aabayaashey ayaan iska raacayaa oo waxey ii sheegeen ee ah sidan fudud ay adduunyadu ku soo bilaamatey ee ilma nabi aden iney is guursadeen ayaan iska aqbalayaa maxaa yeelay taada hadaan raaco waa anigu galey badweyn aan xeeb iyo dakad midnaba aan laheyn oo haadaantii qaaruun ka dhacey ayaan aniguna kaga daba dhacayaa.
qoraalkan waxa uu ka soo baxay maan guracan
W/Q: Khaled Hassan 28th July 2018
Diinta miyaa lagu dhashaa?